Menorah ရွှေပန်းကန်ခွေး Tag ကိုဟီဘရူးအမည်လည်ဆွဲ
ဤသည်စင်ကြယ်သော 14-ကာရက်ရွှေကိုစတုဂံခွေး tag ကိုအစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအတွက်ဝတ်ဆင်ဖော်ထုတ်ခြင်းတံဆိပ်များ၏ပုံစံလုပ်ပါတယ်, နှင့် Menorah ၏သင်္ကေတဖြင့်သမုတ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများအစ္စရေးစစ်သားများကသူတို့အလုပ်လုပ်သောအချက်ကို၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်မိမိတို့၏အရာရှိတဦးကတံဆိပ်များအပြင်, ဤကဲ့သို့သောတံဆိပ်များ, ဝတ်ဆင်ရန်ကိုချစ်။ အဘယ်အရာကိုဒီအေးမြခြင်းထက်သင်အကြိုက်ဆုံးစစ်သားများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပါစေနိုင်မည်နည်း
ဗိမာနျတျော၏ bygone ကာလ၌ယုဒလူတို့စီရင်သောပညတ်တို့ကိုအပေါင်းတို့၌အချိန်ကိုမီးရှို့သံလွင်ဆီ menorah ဖယောင်းတိုင်စောင့်ရှောက်မည်။ ဗိမာနျတျောကိုရောမတို့ကဖကျြဆီးခံခဲ့ရသောအခါ, chandelier သယ်ဆောင်နှင့်ဖုံးကွယ်ခံရဖို့ခဲ့သော်လည်းယနေ့တိုင်တွေ့ရှိသေးပါဘူး။ ဤလှပသောဖယောင်းတိုင်ဆောင်လုလင်၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်များစွာသောဂျူးတွေကသူတို့ရဲ့ဂျူးလက်ဝတ်ရတနာဒီသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်ဝတ်ဆင်နှင့်ယခုသင်သည်ထိုသူတို့ join နိုငျပါသညျ!
ဒီထွင်းထုလက်ဝတ်ရတနာတစ်ဦးချင်းစေ့စပ်လက်ဖြင့် လုပ်. ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကပစ္စည်းတင်ပို့ခံရဖို့အဘို့ပြုလုပ်3ရက်ပေါင်းအထိကြာနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ချက်ထူ Sterling ငွေ Cutout ဟီဘရူးအမည်ပြား
14K သို့မဟုတ် 18K ရွှေဟီဘရူးနှင့်အင်္ဂလိပ်အမည်လည်ဆွဲ
22 381 ပွတ်။